Ukusikwa kwe-Laser kwezingubo zangaphansi zedayi eziphrintiwe nezindwangu - IGolden Laser
Ukusikwa Kwe-Laser Kwezindatshana Ezilayishiwe
Izicelo ze-CO2 Laser Machines Zomkhakha Ongenzi-Metal
Ukusikwa kwe-Laser kwendwangu yangaphansi okubhaliwe kwendwangu nezindwangu
Ubuchwepheshe bokuphrinta kulezi zinsuku busetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene njengezingubo zezemidlalo, izingubo zokubhukuda, isembatho, amabhanela, amafulegi nezimpawu ezithambile. Izinqubo zokuphrinta izindwangu zanamuhla eziphakeme zedinga izixazululo ezisheshayo zokusika. Yisiphi isixazululo esihle kakhulu sokusika izindwangu nezindwangu eziphrintiwe? Ukusika kwendabuko noma ukusikwa kwendabuko kunemikhawulo eminingi. Ukusika kwe-Laser kuba yisixazululo esithandwa kakhulu sokusikwa kwe-contour kwezindwangu eziphansi eziphrintiwe.
Vision Laser Ukusika Isixazululo
Isixazululo sithuthukisa inqubo yokusika ukwakheka kwendwangu okubhaliwe noma kwendwangu ngokushesha nangokunembile, isinxephezelo esizenzakalelayo noma yikuphi ukuhlanekezela noma ukusikeka okwenzeka ngendwangu engazinzile noma elula.
Amakhamera ahlola indwangu, athole futhi aqaphele i-contour ephrintiwe, noma acoshe amamaki okubhalisa aphrintiwe bese umshini we-laser usika imidwebo ekhethiwe. Yonke inqubo isebenza ngokuzenzakalelayo.
UMBONO WESILULEKO SOKUSHAQHAZA UNAMAKHASIMU AMABILI WOKUSEBENZA
Lolu hlelo lokubona lunamandla okuskena ngokushesha indwangu ephrintiwe embhedeni wokusika futhi ngokuzenzekelayo lwenze i-veter yokusika. Akunasidingo sokwenza amadizayini asikiwe, vele uthumele noma yimaphi ama-design usayizi kunoma iyiphi i-oda futhi ukhiqize amabhanela asikiwe ngokuphelele, amafulegi noma izembatho zengubo ezinemiphetho esezingeni eliphakeme.
Izimpawu zokubhaliswa kweskena
Uhlelo lokuqashelwa kwekhamera lusetshenziselwa ukukhomba amamaki okubhalisa aprintwe kwincwadi yakho. Amamaki angafundwa ngokufanele ngohlelo lwethu lwe-laser futhi isikhundla, ubukhulu kanye nokushintshwa kwezinto ezibhaliwe kuzonxephezelwa ngenxa yokuhlaziywa kobuhlakani kwamamaki okubhalisa.
Ukusetshenziswa Kwe-Laser Cutting Sublimation Izindwangu Ephrintiwe Nezindwangu
Izingubo zemidlalo nezingubo eziphrintiwe, izicathulo zezinyawo, izindwangu zasekhaya
I-Vision Laser Cutting System ilungele ukusika izembatho zemidlalo ikakhulukazi ngenxa yekhono lazo lokusika izinto zokwelula nezisontekenteke kalula - luhlobo langempela lwezingubo zokugijimisa (isib. Isembatho sokuhamba ngamabhayisekili, izihlakala zethimba, ijezi, ukugoqa, ukugqoka okusebenzayo njll.)
Ilogo encane, incwadi, inombolo nezinto eziqondile eziphrintiwe
Umsiki we-laser usebenzisa amamaki okubhalisa, futhi i-software ye-GoldCAM ngaphakathi kwe-laser cutter inomsebenzi wesinxephezelo sokuhlanekezela, ongazazisa ngokuzenzakalela izinhlaka ezonakalisiwe ezintweni zokuhambisa udayi.
AmaBanners, amafulegi, ihluzo ezinkulu nezimpawu ezithambile
Le solution yokusika i-laser yenzelwe ngqo imboni yokuphrinta yedijithali. Inikeza amakhono angenakuqhathaniswa wokuqedela imidwebo yendwangu ephrintiwe ngokwedijithali noma edayi-engaphansi kanye nezibonakaliso ezithambile ezinobubanzi obenziwe ngezifiso nobude.
BUKA IMISEBENZI EBALULEKILE KAKHULU YOKWAKHIWA KWESITHUTHA ESIFANELEKILE NAMABHUKHODI WOKUFUNDA
Umshini we-Smart Vision Double Head Laser Cutting Machine
Umshini Wokubhaliswa Kwekhamera Laser
Umshini Omkhulu Wokusika i-Laser Signage